လီဗာပူးအသငျးနညျးပွဟောငျး ဂရြတျဟူလီယာ ကှယျလှနျ – Premier League Special
လီဗာပူးအသငျးနညျးပွဟောငျးဖွဈတဲ့ ဂရြတျဟူလီယာ ဟာအသကျ ၇၃ နှဈအရှယျမှာကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီလို့သိရပါတယျ။ ပွငျသဈသားဖွဈတဲ့ ဟူလီယာ ဟာလီဗာပူးကို ၆ နှဈကွာကိုငျတှယျခဲ့သူဖွဈပွီး ပဲရဈမွို့မှာ နှလုံးခှဲစိတျကုသမှုပွုလုပျပွီး ရကျအနညျးငယျအကွာမှာ ကှယျလှနျသှားတာဖွဈပါတယျ။
သူဟာနှလုံးခှဲစိတျကုသပွီးနောကျ တနင်ျဂနှနေကေ့မှ နအေိမျကိုပွနျလညျရောကျရှိလာသူဖွဈပါတယျ။
ဟူလီယာ ဟာလီဗာပူးအသငျးရဲ့အောငျမွငျမှုအရှိဆုံးနညျးပွတှထေဲက တဈဦးဖွဈပွီး ၂၀၀၁ မှာ အကျဖျအဖေလား၊ လိဂျဖလားနဲ့ ယူအီးအကျဖျအေ ဖလား ၃ လုံးကိုတဈနှဈတညျးဆှတျခူးစခေဲ့သူပါ။
သူဟာ ၂၀၀၁ အောကျတိုဘာလက ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ လိဒျယူနိုကျတကျနဲ့ပှဲကို ကွီးကွပျနရေငျး နမေကောငျးဖွဈခဲ့လို့ အရေးပျေါနှလုံးခှဲစိတျကုသမှု ခံယူခဲ့ရသေးသူဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတုနျးက ဟူလီယာ ဟာ ၅ လကွာအနားယူခဲ့ပွီး လီဗာပူးကိုပွနျလညျဦးဆောငျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ၂၀၀၄ မှာ လီဗာပူးနဲ့လမျးခှဲခဲ့ပွီး သူ့နရောမှာ ဘငျနီတကျဇျအစားဝငျခဲ့ပါတယျ။
သူဟာ လီဗာပူးနဲ့လမျးခှဲပွီး တဈနှဈအကွာမှာ လိုငျယှနျကိုကိုငျတှယျခဲ့ပွီး ၂၀၁၀ မှာ အင်ျဂလနျကိုပွနျလာကာ ဗီလာကို ကွီးကွပျခဲ့သေးပမေယျ့ ကနျြးမာရေးကွောငျ့ ၉ လသာတာဝနျယူပွီး လမျးခှဲခဲ့ရပွနျပါတယျ။ သူဟာ လနျးဈ၊ ပီအကျဈဂြီ တို့အပွငျ ၁၉၉၂ ကနေ ၁၉၉၃ အထိပွငျသဈလကျရှေးစငျအသငျးကိုလညျး ကိုငျတှယျခဲ့ပါတယျ။
၁၉၉၈ မှာလီဗာပူးကိုသူရောကျလာတုနျးက နညျးပွရှိုငျးအီဗနျနဲ့ ပူးတှဲတာဝနျယူခဲ့ရပမေယျ့ နိုဝငျဘာလမှာတော့ တဈဦးတညျးကိုငျတှယျခဲ့ရပါတယျ။ သူကှယျလှနျရတဲ့အကွောငျးဟာ နှလုံးကွောငျ့ဘဲဖွဈနိုငျတယျလို့ သုံးသပျနကွေပမေယျ့ ဘယျလိုရောဂါအခံကွောငျ့လညျးဆိုတာသခြောစှာမသိရသေးပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့လပိုငျးတှမှော ကနျြးမာရေးတျောတျောလေးခြို့တဲ့ခဲ့တယျလို့တော့ သိရပါတယျ။ သူကှယျလှနျကွောငျး ကွားသိရပွီးနောကျ လီဗာပူးအသငျးက ဝမျးနညျးကွောငျး ကွညောခကျြထုတျပွနျခဲ့ပွီး ဟူလီယာ ရဲ့မိသားစုတှေ၊ မိတျဆှတှေနေညျးတူ ကလပျမှာရှိတဲ့သူအကုနျလုံးဟာ ဒီနညျးပွကွီးကို သတိတရရှိနကွေပွီလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
ဟူလီယာလကျထကျမှာ ခွစှေမျးပိုမိုတောကျပလာခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျလကျရှေးစငျဟောငျး မိုကျကယျအိုဝငျကလညျး လုံးဝကို စိတျထိခိုကျခဲ့ရပွီး ကွီးကယျြခမျးနားလှပွီး ပါရမီရှိတဲ့သူကို ဆုံးရှုံးလိုကျရပွီ လို့သူ့ရဲ့တှဈတာစာမကျြနှာကနေ ပွောခဲ့ပါတယျ။
အင်ျဂလနျလကျရှေးဟောငျးနောကျတဈဦးဖွဈတဲ့ လိုငျနီကာကလညျး ဟူလီယာ ကှယျလှနျသှားရှာပွီ. စမတျကပြွီး နှေးထှေးပြူငှာတဲ့စိတျသဘောရှိသူဖွဈတာကွောငျ့ ဘောလုံးလောကမှာ လူခဈြခငျမှုအရှိဆုံးသူတှထေဲကတဈဦး ဖွဈတယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
လီဗာပူးအသင်းနည်းပြဟောင်း ဂျရတ်ဟူလီယာ ကွယ်လွန်
လီဗာပူးအသင်းနည်းပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဂျရတ်ဟူလီယာ ဟာအသက် ၇၃ နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ ပြင်သစ်သားဖြစ်တဲ့ ဟူလီယာ ဟာလီဗာပူးကို ၆ နှစ်ကြာကိုင်တွယ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ပဲရစ်မြို့မှာ နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာနှလုံးခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် တနင်္ဂနွေနေ့ကမှ နေအိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်။ ဟူလီယာ ဟာလီဗာပူးအသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိဆုံးနည်းပြတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၂၀၀၁ မှာ အက်ဖ်အေဖလား၊ လိဂ်ဖလားနဲ့ ယူအီးအက်ဖ်အေ ဖလား ၃ လုံးကိုတစ်နှစ်တည်းဆွတ်ခူးစေခဲ့သူပါ။
သူဟာ ၂၀၀၁ အောက်တိုဘာလက ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ လိဒ်ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲကို ကြီးကြပ်နေရင်း နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့လို့ အရေးပေါ်နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခဲ့ရသေးသူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဟူလီယာ ဟာ ၅ လကြာအနားယူခဲ့ပြီး လီဗာပူးကိုပြန်လည်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၀၄ မှာ လီဗာပူးနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီး သူ့နေရာမှာ ဘင်နီတက်ဇ်အစားဝင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လီဗာပူးနဲ့လမ်းခွဲပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ လိုင်ယွန်ကိုကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ မှာ အင်္ဂလန်ကိုပြန်လာကာ ဗီလာကို ကြီးကြပ်ခဲ့သေးပေမယ့် ကျန်းမာရေးကြောင့် ၉ လသာတာဝန်ယူပြီး လမ်းခွဲခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ သူဟာ လန်းစ်၊ ပီအက်စ်ဂျီ တို့အပြင် ၁၉၉၂ ကနေ ၁၉၉၃ အထိပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းကိုလည်း ကိုင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၈ မှာလီဗာပူးကိုသူရောက်လာတုန်းက နည်းပြရွိုင်းအီဗန်နဲ့ ပူးတွဲတာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာတော့ တစ်ဦးတည်းကိုင်တွယ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူကွယ်လွန်ရတဲ့အကြောင်းဟာ နှလုံးကြောင့်ဘဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်နေကြပေမယ့် ဘယ်လိုရောဂါအခံကြောင့်လည်းဆိုတာသေချာစွာမသိရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေမှာ ကျန်းမာရေးတော်တော်လေးချို့တဲ့ခဲ့တယ်လို့တော့ သိရပါတယ်။ သူကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိရပြီးနောက် လီဗာပူးအသင်းက ဝမ်းနည်းကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဟူလီယာ ရဲ့မိသားစုတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေနည်းတူ ကလပ်မှာရှိတဲ့သူအကုန်လုံးဟာ ဒီနည်းပြကြီးကို သတိတရရှိနေကြပြီလို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဟူလီယာလက်ထက်မှာ ခြေစွမ်းပိုမိုတောက်ပလာခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ဟောင်း မိုက်ကယ်အိုဝင်ကလည်း လုံးဝကို စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပြီး ပါရမီရှိတဲ့သူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီ လို့သူ့ရဲ့တွစ်တာစာမျက်နှာကနေ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်လက်ရွေးဟောင်းနောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လိုင်နီကာကလည်း ဟူလီယာ ကွယ်လွန်သွားရှာပြီ. စမတ်ကျပြီး နွေးထွေးပျူငှာတဲ့စိတ်သဘောရှိသူဖြစ်တာကြောင့် ဘောလုံးလောကမှာ လူချစ်ခင်မှုအရှိဆုံးသူတွေထဲကတစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အမှားလုပျပွီး ခြီးကြူးခံရခငျြရငျ မျောရငျဟိုလကျအောကျမှာ ဂိုးသမားတာဝနျထမျးဆောငျပါ